बुधबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बुधबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ?
स्वास्थ्यखबर बुधबार, पुस २९, २०७७, १६:४०:००
काठमाडौं - नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ६६ हजार १ सय ४३ पुगेको छ। गत २४ घण्टामा ४ सय ४५ जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये ४ हजार ४ सय ३४ जना सक्रिय संक्रमित छन्।
प्रदेश १ को झापामा ५, तेह्रथुममा १, पाँचथरमा १, भोजपुरमा १, मोरङमा ११ र सुनसरीमा ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रदेश २ को धनुषामा १, पर्सामा ३, सप्तरीमा २३, सर्लाहीमा १ र सिरहामा ४ जनामा कोरोना भेटिएको छ।
बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा मात्र १ सय ८९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काभ्रेमा ७, चितवनमा १, दोलखामा ५, धादिङमा ४, नुवाकोटमा २, भक्तपुरमा १९, मकवानपुरमा ३, रसुवामा ३, ललितपुरमा ३८ र सिन्धुपाल्चोकमा ४ जनामा कोरोना भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत २४ घण्टामा गरिएको परीक्षणमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा २८, गोरखामा १, तनहुँमा २, पर्वतमा २, म्याग्दीमा २, लमजुङमा २ र बागलुङमा १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा ४, कपिलवस्तुमा ५, गुल्मीमा २, दाङमा २, नवलपरासीमा १, पाल्पामा २, बर्दियामा ६, बाँकेमा २५, रोल्पामा १ र रुपन्देहीमा १८ जनामा कोरोना पाइएको छ।
गत २४ घण्टामा कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा मात्र कोरोना भेटिएको छ। जुम्लामा १ जना कोरोना भेटिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा १ र बझाङमा १० जनामा कोरोना भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्वभर काेराेना भाइरसबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या २० लाख नाघ्याे विश्वभर संक्रमितको संख्या ९ करोड ३७ लाख ५१ हजार पाँच सय पुगेको छ। महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा संक्रमितको संख्या दुई करोड ३४ लाख ९१ हजारभन्दा धेरै पुग्दा तीन लाख ९१ हजार पाँच सयभन्दा बढी अमेरिकीको कोभिड–१९ बाट ज्यान गएको छ। २ घण्टा पहिले
बर्दियाका थारु समुदायका ११ दशमलब ३ प्रतिशतमा सिकल सेल परिषद्ले बर्दियाका थारु समुदायमा २० हजार जनामा यो अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनबाट २० हजार मध्ये २ हजार २५६ जना अर्थात ११ दशमलब ३ प्रतिशतलाई सिकल सेल डिस्अर्डर भएको पत्ता लागेको हो। १७ घण्टा पहिले
रामजी र पंकजले दिन पाए एमबिबिएसको बाँकी परीक्षा आइओएमकी डिन डा शाहले रामजी र पंकजलाई परीक्षामा सहभागी गराउन नेसनल मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएपछि कलेजले आफूलाई बाँकी परीक्षामा सहभागी गराएको परीक्षार्थी रामले स्वास्थ्यखबरलाई बताए। १८ घण्टा पहिले
के सुतेको बेला धेरै घुर्नु रोग हो? किन हुन्छ? कसरी छुट्कारा पाउने? ५९ मिनेट पहिले
तौल घटाउन डोरी खेल्छिन सोनाक्षी सिन्हा, यस्ता छन् डाेरी खेल्दा हुने फाइदा ४ घण्टा पहिले
बर्दियाका थारु समुदायका ११ दशमलब ३ प्रतिशतमा सिकल सेल १७ घण्टा पहिले
जिपी कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रद्वारा विभिन्न २५ पदका लागि ७० जना कर्मचारी माग १९ घण्टा पहिले
शुक्रबार कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? २० घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा २७० संक्रमित थपिए, ५ जनाको मृत्यु २० घण्टा पहिले
नेपालले दियो भारतको 'कोभिसिल्ड' कोरोना भ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति २० घण्टा पहिले